Omume Cosmic - WRSP
OKWU OKWU COSMIC
1839 (June): Mary Ware (nke e mechara mara dị ka Una, Madame Théon, Theona na Alma) mụrụ na Sutton Courtenay, Berkshire, England.
1850: Eliezer Bimstein (nke e mechara mara Maximillian Louis Bimstein, Max Théon na Aia Aziz) mụrụ, ikekwe na Warsaw, Poland.
1867: Mary Ware guzobere ebe obibi ndị nọn nke Anglịkan na Claydon, Suffolk, England.
1884: Mary Ware, n'okpuru aha Una, guzobere Universal Philosophical Society na London.
1884: Ebu ụzọ kpọọ M. Theon dị ka onye isi ukwu nke mpụga nke Hermetic Brotherhood nke Luxor.
1885 (March 21): Mary Ware na Maximillian Louis Bimstein lụrụ na London.
1886: Theons, ya na odeakwụkwọ ha bụ Teresa (Augusta Rolfe), hapụrụ London wee gaa France.
1887: Theons biri na Tlemcen, Algeria.
1898-1899: Ederede nke Max Théon bịanyere aka na Akwụkwọ akụkọ Magnetism et de la Psychologie.
1901 (Janurary): Mpịakọta nke mbụ nke Akwụkwọ Cosmique, nke François-Charles Barlet dere, bipụtara na Paris.
1903: Mpịakọta nke mbụ nke La Omenala Cosmique bipụtara na Paris.
1904: Louis Thémanlys sonyeere Cosmic Movement.
1906 (Disemba 10): Louis Thémanlys na Claire Blot lụrụ na Paris.
1908 (Septemba 10): Madame Théon nwụrụ na Jersey.
1909 (Septemba 27): Pascal Thémanlys mụrụ.
1913: Mpịakọta nke mbụ nke Le Mouvement Cosmique bipụtara na Paris site n'aka Louis Thémanlys.
1919: Théon na Teresa gara Paris.
1920: Ndị Idéal et Réalité ndi otu a guzobere na Paris site na Louis Thémanlys na Gustave Rouger.
1927 (March 4): Max Théon nwụrụ na Tlemcen.
1932: Dr. François Couillaud guzobere Cosmic Society na Paris.
1933: Mirra Alfasa were akara Max Max Theon (otu hexagram nke nwere square nke nwere otutu otutu na-ese n'elu mmiri n'ime ya) wee mee ya akara Sri Aurobindo.
1934: Pascal Thémanlys bipụtara akwụkwọ na onye guzobere usoro Hassidic, Les Merveilles du Besht.
1943 (Jenụwarị 13): Louis Thémanlys nwụrụ na Pau.
1949: Pascal Thémanlys kwagara Israel.
1955: Pascal Thémanlys bipụtara Max Théon et la Philosophie Cosmique.
1967: Maurice (Moïse) Benharoche-Baralia bipụtara À l'Ombre de la Omenala Cosmique.
1975: Pascal Thémanlys guzobere otu Argaman na Jerusalem.
2000 (June 25): Pascal Thémanlys nwụrụ na Jerusalem.
NT /R / / ECHICHE GROUP
E guzobere Cosmic Movement na France na mbido 1900s. Ndị guzobere ije ahụ, ndị biri n'oge ahụ na Villa Zarif dị nso na Tlemcen na northwest Algeria, bụ Max Théon [Image n'aka nri] na nwunye ya, Madame Théon. Dị ka ndị mgbaasị ndị ọzọ nke oge ahụ, ha jiri aha dị iche iche mee ihe n'oge ndụ ha niile, ma zoo ezigbo njirimara ha. Max Théon bụ onye a maara dị ka Aia Aziz, na nwunye ya dị ka Una, Alma, na Theona.
Max Théon (~ 1850-1927) mụrụ na Warsaw, Poland n'ime ezinụlọ ndị Juu dika Eliezer Mordechai Bimstein. Ọ kwagara London na mbido 1870, ma buru ụzọ kpọọ ya aha na 1884 dị ka nna ukwu nke mpụga nke Hermetic Brotherhood nke Luxor. Na-arụ ọrụ n'ime iri afọ ndị gara aga nke narị afọ nke iri na itoolu, thetù Hermụnna Hermetic nke Luxor (HB nke L.) bụ usoro nzuzo nke na-enye ntuziaka bara uru na anwansi. Ebumnuche ya iji bulie mmepe ime mmụọ nke mmadụ na ịzụlite ikike anwansi nke ndị òtù ya (Godwin, Chanel na Deveney 1995).
A mụrụ Madame Théon (1839-1908) dịka Mary Ware, na Sutton Courtenay, obere obodo dị na ikpere mmiri nke osimiri Thames. A zụlitere ya n'ụlọ nne nne ya, n'obodo Marcham na Oxfordshire. Na ngwụsị 1860s, ọ bịara mata echiche mgbanwe Anglo-Katọlik nke mmegharị Oxford, nke kwadoro mgbanwe ndị mọnk na Chọọchị England. O guzobere ulo uka nke ndi Anglican na Claydon, Suffolk, ma jee ozi dika nne ya kariri ihe kariri afo iri (Huss 2015). Ka oge na-aga, ọ bịara nwee mmasị na mmụọ ime mmụọ, na, na-aga n'aha Una, guzobere otu ndị isi na London na 1884, Universal Philosophic Society. Ebumnuche nke ọha mmadụ (mgbanwe ime mmụọ nke ọha mmadụ, nyocha nke anwansi sayensị, na mmepe nke ike mmụọ) na-atụ anya ụfọdụ nkuzi nke Cosmic Movement (Chanel 1993: 219-29). [Foto dị n'aka nri]
O nwere ike ịbụ na ndị mmụọ na ndị isi na London ka ndị isi abụọ ga-eme n'ọdịnihu nke Cosmic Movement zutere. Ha lụrụ na Machị 1885, otu afọ gachara, hapụ London, gafee France, ma mesịa biri na Tlemcen, Algeria. N'ebe ahụ, di na nwunye ahụ haziri nnọkọ na Madame Théon mepụtara ọtụtụ ihe odide na ọnọdụ nke ọhụụ. Ndị Theons nọgidere na-azụlite nkuzi ha, ha na ndị mgbaasị nọ na Europe na-emekọ ihe ma na-anabata ndị ọbịa nwere mmasị na nkuzi na omume ha.
Site na 1898-1900, Théon bipụtara usoro isiokwu na Akwụkwọ akụkọ ndọta, nke Alban Dubet dezigharịkwara, ya na mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi, nke isiokwu ya bụ Ọnọdụ Ime Mmụọ, nke onye nkwuputa anwansi, Lucien Chamuel bipụtara. N'ime akwụkwọ ndị mbụ a, Theon katọrọ mgbaasị Allen Kardec, ma gosipụta ụfọdụ echiche nke Cosmic Philosophy (Chanel 1993: 394-412).
Na Jenụwarị 1901, mbipụta mbụ nke Akwụkwọ Cosmique, nke a raara nye “iweghachi ọdịnala mbụ,” “otu ìgwè nke ụmụ akwụkwọ ndị a na-amaghị ma nwee ezi obi” bipụtara. Ihe osise nke lotus na-ese n'elu mmiri dị na peeji nke ya na square ya dị n'etiti hexagram n'ihu ya. Nke a bụ akara nke "odeakwụkwọ nke nkuzi nke mbara igwe" nke aha ya, Aia Aziz, pụtara naanị na mbipụta ndị ọzọ.
Onye nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ a na onye ndu nke usoro ọhụụ na Paris bụ François-Charles Barlet (Albert Faucheux 1838-1921), onye bụ isi na fin de siècle French esoteric milieu (Laurant 2006). [Foto dị n'aka nri] Na 1902, na-eso esemokwu na Théon, ọ gbara arụkwaghịm site na idezi ya Akwụkwọ Cosmique ma hapụ ije ahụ.
Mgbe Barlet pụọ, Théon deziri ya Akwụkwọ Cosmique n'okpuru aha Aia Aziz. Na 1904, onye edemede na-eto eto bụ Louis Thémanlys (Louis Moyse 1874-1943), onye sitere na ezinụlọ ndị Juu a ma ama na France (Beer, Furtado, na Solar), sonyeere Cosmic Movement wee bụrụ onye isi nke etiti ya na Paris. Na 1906, ọ lụrụ Claire Blot (1883-1966), ada nke onye na-ere ahịa ama ama bụ Eugène Blot (1857-1938). Claire Thémanlys, bụ onye na-egwu egwu, sonyekwara n'òtù ahụ ma mesịa dee ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na egwuregwu ndị sitere na nkuzi ya. Ọ gbasoro ya na njem ya nne na nna na ụmụnne. [Foto dị n'aka nri]
Otu enyi nke Louis Thémanlys, Matteo Alfassa (1876-1942), nwa nke ezinụlọ ndị Juu Sephardic bara ọgaranya, sonyekwara na Cosmic Movement, ma soro ya, nwanne ya nwaanyị, Mirra Alfassa (1878-1973). Mirra, onye, ​​na 1920s, ga - akpọ aha "Nne" na Ngwakọta Yoga nke Sri Aurobindo (1872-1950), bụ nwa akwụkwọ nka. Ọ ghọrọ onye na-eso ụzọ na-anụ ọkụ n'obi nke Cosmic Movement wee gaa na Théons na Algeria na 1906 na 1907. Di mbụ Mirra, onye na-ese ihe Henri Morisset (1870-1956), na di ya nke abụọ, onye bụbu pastọ na ọkàiwu Paul Richard (1874-1964) ), bụ ndị so na ngagharị ahụ. N'oge ahụ, ndị na-eso Cosmic Movement na Paris hiwere Echiche Egwuregwu, nke zutere n'ụlọ Louis na Claire Thémanlys na 54 Rue Nicolo, na nke iri na isii nke Paris ime obodo. Ebumnuche nke otu a bu igbasa echiche nke uwa site na nkuzi, nzuko, ihe ngosi, akwukwo na egwu (Status du Ọchịchị “Echiche” nd).
Akwụkwọ ndị bụ isi nke mmalite Cosmic Movement bụ Akwụkwọ Cosmique, [Foto dị n'aka nri] pụtara na 1901 ruo 1908, La Omenala Cosmique, bipụtara n’agbata afọ 1903 na 1906, na ọtụtụ akwụkwọ na akwụkwọ nta ndị ebipụtara Les Akwụkwọ Mgbasa Ozi. Akwụkwọ Cosmic Movement gụnyere nkwurịta okwu banyere Cosmic Philosophy, akwụkwọ edemede, na nyocha akwụkwọ. E bipụtara opus nke La Omenala Cosmique dabeere na mkpughe ndị a natara n'ọnọdụ nke passivity zuru ezu, ma ọ bụ zuo ike, dị ka ọtụtụ ederede ndị ọzọ Madame Theon dere. Edere ihe odide nke Cosmic Movement n'afọ ndị a n'asụsụ Bekee na Kpakpando ningtụtụ Magazin bipụtara na Loudsville, Georgia, nke Peter Davidson dere (1837-1915), onye ya na Théon rụkọtara ọrụ na HB nke L. wee kwaga United States si Scotland na 1886. N'agbata 1907 na 1908, ntụgharị asụsụ nke isiokwu sitere na Akwụkwọ Cosmique bipụtara na Czech, na Jouranl Kosmické Rozhledy, nke onye mgbaasị Czech bụ Miloš Maixner dere (1873-1937), onye ghọrọ onye na-eso ụzọ Cosmic Movement n'oge ahụ (Čapková na-abịa).
Na Septemba 1908, Madame Théon nwụrụ mgbe ọ gara Europe. Théon na onye odeakwụkwọ ya bụ Augusta Rofle (1845-1935), nke a maara dị ka Teresa, gara biri na Algeria. Mgbe nwunye ya nwụsịrị, Théon etinyeghị aka na ọrụ nke usoro ahụ na Akwụkwọ Cosmique kwụsịrị ịpụta. Ka o sina dị, ọ nọgidere na-edegara ndị isi na ndị na-eso òtù ahụ akwụkwọ, na-agwọ ọrịa, ma na-anabata ndị ọbịa nwere mmasị na nkuzi ya. Site na 1919-1920, Theon soro Teresa gaa Paris, nọrọ ebe ahụ ọnwa ole na ole, wee zute ndị otu ngagharị. N'ime afọ ndị ikpeazụ ya, Théon jikọtara na ndị Juu obodo Tlemcen. Ọ nwụrụ na Machị 4, 1927.
Louis Thémanlys gara n'ihu na-eduzi Cosmic Movement, ma bipụta mbipụta ole na ole nke akwụkwọ akụkọ ọhụrụ, Le Mouvement Cosmique (na 1913, 1914, na 1920), mpịakọta abụọ ọzọ (5 na 6) nke La Omenala Cosmique (1920), tinyere akwụkwọ ole na ole nke aka ya, nke ndị bipụtara Les Akwụkwọ Mgbasa Ozi. N'oge Agha Worldwa Mbụ, òtù ahụ dara jụụ, mana ịmaliteghachi ọrụ ya ozugbo agha ahụ bisịrị. Na 1919, ndị otu òtù ahụ bipụtara akwụkwọ akụkọ ọhụrụ, Nka, Sayensị et Peuple, nke gosipụtara nkwenye nke otu ahụ na ọnọdụ ime mmụọ na sayensị kwekọrọ. Na 1921, Louis Thémanlys, na nkwado nke onye edemede, onye na-ede uri, na onye na-agụ egwu bụ Gustave Rouger, guzobere otu ọhụụ, Idéal et Réalité. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ site na echiche nke Cosmic Philosophy, mana e nyefere ya ọtụtụ na Arts. Ndị otu Cosmic Movement, na ọkachasị ndị ezinaụlọ Thémanlys na Blot, soro na-arụsi ọrụ ike na otu a, nke dọtara ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ, ndị na-eme ihe nkiri, ndị edemede, na ndị egwu, yana ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị oke ala, na ndị anwansi. Ndị otu a bipụtara akwụkwọ akụkọ, nke isiokwu ya bụ Idéal et Réalité: Akwụkwọ edemede, Pensée, Art, nke pụtara site na 1922-1930 (Huss 2016). Pascal Thémanlys (1909-2000), nwa nwoke nke Louis na Claire, ndi biputara akwukwo abu abu mgbe ha di obere, sonyekwara na Cosmic Movement na Idéal et Réalité okirikiri. Louis na Pascal nwere mmasị na Kabbalah, na ụfọdụ n'ime ederede mgbe ochie nke Louis (dịka Quleques Colonnes dans le .lọ Nsọ, nke e bipụtara na 1927), [Foto dị n'aka nri] Louis jikọtara echiche ndị bụ isi nke Cosmic Philosophy na echiche Kabbalistic. N’afọ ndị 1930, Pascal sonyeere ndị otu Zionist. Na 1934, o bipụtara akwụkwọ na Baal Shem Tov, onye guzobere ngagharị Hassidic, Les Merveilles du Besht, na 1938, otu akwụkwọ aha ya Le Grands d`Israël. N'ime oge ikpeazụ nke Agha Worldwa nke Abụọ, ezinụlọ Thémanlys biri na Pau, n'ime Mpaghara French Free, ebe, na 1943, LouisThémanlys nwụrụ. Na 1949, Pascal, nwunye ya Raymonde, na nne ya, Claire, kwagara mba ọhụrụ Israel.
Otu ọzọ nke ụmụazụ nke Cosmic Philosophy nke na-arụ ọrụ na 1930 bụ Dr. François Couillaud bụ onye isi. Couillaud, onye mbụ zutere Theon na Paris na 1920, biri na Tlemcen maka afọ ole na ole, wee gwọọ Theon mere agadi. Na 1932, o guzobere “Cosmic Society” na Paris wee bipụta ọtụtụ mbipụta ọhụụ nke Akwụkwọ Cosmique n'etiti 1934-1937 (Chanel 1993: 129, 517).
Ekwesiri ighota na ozizi nke Cosmic Movement nwere mmetuta na nkuzi nke ndi isi ochichi nke ndi India gbanwere onye nkuzi ime mmuo, Sri Aurobindo (Aurobido Ghose). Abụọ ndị so na Cosmic Movement, Mirra Alfassa na di ya nke abụọ, Paul Richard, zutere Aurobindo na Pondicherry (Puducherry) mgbe ha gara India na 1914-1915. Richard kwadoro Aurobindo na ịmalite akwụkwọ nke akwụkwọ akụkọ ahụ Arya, nke e gosipụtara usoro izizi nke Aurobindo's Integral Yoga philosophy. Di na nwunye ahụ laghachiri Pondicherry na 1920, mana Richard hapụrụ obere oge, ebe Mirra Alfassa nọgidere. Na 1926, Aurobindo ghọtara Mirra Alfassa dị ka njiko nke Shakti, ike nwanyị nke nwanyị, wee bụrụ onye a maara dị ka "mama ahụ." Alfassa nyeere aka guzobe Sri Aurobindo Ashram na Pondicherry, ebe o bi na ndụ ya niile. Offọdụ echiche Aurobindo (dịka echiche nke "mmụọ" dị ka mkpụrụ obi evolutionary na okwu French ozu corrieux Cosmic Philosophy nwere mmetụta dị ka ihe zuru oke nke anụ ahụ), dị ka Paul Richard na mama ahụ zigara Aurobindo. Na 1933 mama m weere akara nke Cosmic Movement (a hexagram na-ekpuchi square nke nwere otutu mmiri na-ese n'elu mmiri n'ime) wee mee ya akara Sri Aurobindo (Heehs 2011).
Mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị, ọtụtụ Cosmic Philosophy gara n'ihu na-amụ, ma na-eme ya, na France, Israel, na, n'oge na-adịbeghị anya, na Turkey.
Na France, onye dere abụ Jacques Janin (aka Jean Jacquin 1889-1967), onye na-arụsi ọrụ ike na Cosmic Movement na Idéal et Réalité otu (na onye dere ọtụtụ ihe e dere site na Cosmic Philosophy), na nwunye ya, Suzanne, gara n'ihu ịhazi nzukọ ọmụmụ ihe na ntụgharị uche ruo mgbe Jacques Janin nwụsịrị na 1967 (Raziel na-abịa). Mgbe Janin nwụsịrị, Louisette Hédé (onye nne ya bụ onye otu na-eme tupu agha ahụ) na di ya, Yvon Deschamps, gara n'ihu na-eduzi ọrụ nke otu (Raziel na-abịa).
Maurice (Moïse) Benharoche-Baralia (1892-1977), onye ghọrọ onye na-eso ụzọ Cosmic Movement na mbido 1930, gara n'ihu na-enwe mmasị na Cosmic Tradition, na 1967 bipụtara akwụkwọ aha ya À l'Ombre de la Omenala Cosmique (Benharoche-Baralia 1967), nke Jacques Janin na Pascal Thémanlys na-ebu ụzọ. Otu ọzọ sitere n'ike mmụọ nsọ Cosmic guzobere na France site n'aka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Jacques Duchemin, onye na-eso ụzọ Janin na Benaroche, na nwunye ya, Chantal Duchemin (Chanel 1993: 516, 554). Di na nwunye a, bu ndi na-eji aha nzuzo Jacques na Chantal Baryosher, weghachiri akwukwo mbu mbu nke Akwụkwọ Cosmique (1992), yana ọtụtụ ederede mbụ jikọtara Cosmic Philosophy na Kabbalah: Fleurs Entr'ouverts - Propos Initiatiques suivi de Enseignement de la Philosophie Cosmique, Aia Aziz na-agbanwe agbanwe (1982) na Premiya Pas vers la Kabbale (1995). Otu ọzọ, nke Pascal Thémanlys na-akwado, bụ onye Fernande Boissay duziri, onye haziri ọmụmụ ihe na ntụgharị uche n'ụlọ ya na Paris dịpụrụ adịpụ Sceaux ruo mgbe ọ nwụrụ na 1993. N'afọ ndị 1980, Ewa Raziel na di ya mbụ, Bertrand Déprés, guzobere ọmụmụ na "passivity" gburugburu na rue Férou na Paris, nke Pascal Thémanlys na Fernande Boissay na-akwado.
Dịka e kwuru n'elu, Pascal Thémanlys [[Foto dị n'aka nri] kwagara Israel na 1949. Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi nke ngalaba French nke Ngalaba Ozi nke Agencylọ Ọrụ Ndị Juu, ma dezie akwụkwọ akụkọ ya, Renaissance. Ọ gara n'ihu na-enwe mmasị na Kabbalah ma n'otu oge ka a gwara ya ka ọ kụzie ọdịnala Cosmic. N'ime afọ ndị 1950 na 1960, ọ zutere ndị Juu Kabbalist na Jerusalem wee chọọ iguzobe ụlọ akwụkwọ Kabbalistic nke oge a. Na 1955, o bipụtara akwụkwọ na Théon na Cosmic Philosophy, Max Théon et la Philosophie Cosmique, na 1963, ihe ncheta ya, nke akpọrọ Un Itiniraire de Paris a Jerusalem (Thémanlys 1963). Na 1970, Pascal Thémanlys guzobere otu Argaman, raara nye ọmụmụ Kabbalah na Cosmic Philosophy. N'ime ndị otu ahụ bụ Yehuda Hanegbi (1917-2003) Danielle Storper-Perez (b. 1938), Nadine Shenkar, Avi Yasur (1949-2010) (onye mechara hapụ njem ahụ ma guzoro n'isi otu ndị ọmụmụ ihe Israel. nke Usoro nke Ọrụ Ebube) na Arieh Rottenberg, onye ya na nwunye ya Ala hụrụ na nhazi otu na ihe omume. N'ime 1980, Arieh Rotenberg na Danielle Storper-Perez, meghere ụlọ tii, na ụlọ ahịa Esoteric, Pinat ha'Nistar (The Esoteric Corner), na mpaghara Nahlao`t dị na Jerusalem (Bender 1982). Ewa Raziel, onye kwagara Israel na 1983, sonyeere otu ahụ. Otu ìgwè nke mmụta maka ọmụmụ mbara igwe zutere n'ụlọ ya na mbido 1990, ma mesịa duru ndị otu ndị ọkachasị na-agwọ ọrịa na ndị na-elekọta mmadụ. Ndị otu Argaman guzobere na 1978 Achlama Healing Institute nke Jerusalem, nke chọrọ ịkụzi ma na-eme Cosmic Tradition na usoro ndị Juu:
Alọ ọrụ Achlama Healing bụ nke Torah na Torah. Ihe a raara nye n'ihu Torah na nghọta sayensị site n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche gụnyere ịgụ ihe, ekpere, izu ike, mmega ahụ, nri, nri, na ebe a na-enwe nrọ (Achlama Newsletter 1978)
Argtù Argaman bipụtara ọtụtụ akwụkwọ nke Cosmic Movement, gụnyere nsụgharị nke ọrụ nke Théon na Pascal Thémanlys na Hibru na ụfọdụ ederede mbụ nke Théons (Théon 1991, 1992). Ndị otu ahụ sụgharịkwara akwụkwọ a ma ama nke Aryeh Kaplan Ntụgharị uche na Kabbalah (1999) gaa na Hibru. Kemgbe Pascal nwụsịrị, Arieh na Ala Rotenberg anọgidewo na-eduzi ọmụmụ ihe na ntụgharị uche mgbe nile.
Kemgbe 2014, otu ọzọ nwere mmasị na Cosmic Tradition arụ ọrụ na Istanbul. Ọ bụ Nicolas na Nalan Lecerf, bụ ndị raara onwe ha nye ọmụmụ na omume nke Cosmic Tradition (Toumrakine na-abịa). Ha weputara ulo oru nkuzi nke Green Green's Creation na webusaiti nke gunyere Onodi Scola Hermetica, na magazin dị n'ịntanetị Sophia. Ndị otu a nwere mmasị n'ọtụtụ ọdịnala ime mmụọ dị iche iche, mana ụlọ akwụkwọ echiche abụọ bụ isi nọchiri anya na webụsaịtị ha bụ ụlọ akwụkwọ Gurdjeffian nke anọ na Cosmic Movement. Mkpokọta ahụ gụnyere ọtụtụ ederede nke Cosmic Movement, nke ka ukwuu n'ime ederede nke Theons ', na nke Louis, Claire, na Pascal Thémanlys, sụgharịrị site na French gaa Bekee na Turkish.
Ebumnuche nke Cosmic Movement, dị ka ekwuru na Akwụkwọ Cosmique, bụ:
Igosiputara ndi mmadu “ihe mmuta nke uche” bu ezi ihe na ebumnuche nke ndu na ubara nke ikike ndi mmadu puru isi weputa, igosiputa na ndi mmadu sitere na Chineke ma obu oru ha bu igosiputa chi di na ha. , iji bulie ma mee ka ndi mmadu ndi mmadu na ndi mmadu na-emepeghi aka weghachite, weghachite omenala ndi mmadu furu efu, iji jikota sayensi na omumu, na igosi na site na mgbanwe, ndi mmadu nwere ike inwetaghachi onodu ha nke anwughi anwu (Akwụkwọ Cosmique 7, mba. 1 Jenụwarị 1908, peeji nke aha).
Ozizi nke Cosmic Movement, nke a maara dika The Philosophie Cosmique, na-eweta ozizi dị mgbagwoju anya na nke ọhụụ, ụfọdụ n'ime ha dabere na echiche nke HB nke L, Una's Universal Philosophic Society, yana nke mmegharị esoteric ndị ọzọ. Ihe odide mbu nke Cosmic Movement nwekwara ụfọdụ okwu na echiche Kabbalistic. Ka oge na-aga, a na-etinye ihe ndị ọzọ dị na Kabbalistic n'ime Cosmic Philosophy, a na-ahụkwa Ọdịmma Cosmic dị ka ya na ndị Juu Kabbalah nwere njikọ chiri anya.
Offọdụ n'ime ozizi ndị dị na mbara igwe bụ nke mbụ edepụtara na isiokwu nke Théon na Akwụkwọ akụkọ ndọta na 1898-1900. Emepụtara ha ọzọ na mbipụta nke Cosmic Movement, nke pụtara site na 1901, na n'ihe odide nke ndị na-eso ụzọ nke oge a.
The Cosmic Philosophy na-enye ihe omimi di omimi nke ihe omuma nile bu ihe, ma ewezuga usoro kachasi elu, nke Akpata sans Cause (Ihe Na-enweghị Isi) ma ọ bụ ansdị Sans (Lessdị). E gosipụtara ụwa dị iche iche, site n'ụkpụrụ aghụghọ nke ihe ruo n'okike, dị ka ngalaba gbara gburugburu Nucleolinus, ngosipụta mbụ, ma ọ bụ mkpuchi, nke Formless, nke mejupụtara Lovehụnanya, Ìhè, na Ndụ. Dabere na Cosmic Philosophy, e nwere mpaghara anọ ma ọ bụ ụwa (Occultismes, Pathétismes, Ethérismes & Matérialismes), nke ọ bụla n’ime ha kewara site na mkpuchi, ma kee ya ụzọ asaa ma ọ bụ ụgbọ elu. N'akwụkwọ ndị e dere n'oge gara aga nke Cosmic Movement, a chọpụtara ebe ndị a na ebe anọ dịpụrụ adịpụ nke Kabbalah. Gbọ ala kachasị dị ala nke ala (ala, ala ụwa) ezughi oke na ezughị oke, n'ihi na ike nke ihe ọjọọ, nke a na-akpọ Ndi iro, na-achịkwa Etat Nerveux (ụgbọ elu ụjọ), ụgbọ elu dị n'elu ụwa anyị, ma mepụta enweghị nhịahụ na ụwa. Na Ndi iro napụrụ mmadụ anụ arụ mbụ ya, nke anaghị anwụ anwụ, ma maa ya ikpe ịnwụ anwụ. Agbanyeghị, mgbe ikike ọgụgụ isi na ọgụgụ isi nke mmadụ na-agbanwe ọzọ, ụmụ mmadụ ga-enwete anwụghị anwụ nke anụ ahụ. Mgbe ahụ, ụmụ mmadụ ga-enwe ike imeri ụgbọ elu ụjọ ahụ, wee weghachi nkwekọ nke eluigwe (Chanel 1993: 567-879; Chanel 2006: 1112-13; Heehs 2011: 219-47).
Ozizi nke mbara igwe na-ekwu na ọ dabere na Ọdịnala Cosmic, amamihe dịịrị ọtụtụ oge nke kpasuru okpukpe niile iwe ma jikọtara ma kwekọọ sayensị na nkà mmụta okpukpe. Ndị Kaldea oge ochie, ndị Ijipt, na ndị Hibru maara amamihe a ma oge na-aga, ọ furu efu ma ọ bụ gbagọọ agbagọ. Enwere ike ịchọta ụzọ nke amamihe oge ochie n'ọtụtụ ọdịnala esoteric, dị ka mbụ Cosmic Tradition si kwuo okwu site na mbido. Dabere na ndị na-eso Cosmic Movement, a malitere Théon n'ime ọdịnala ahụ mgbe ọ dị obere. Ihe omuma nke oma, dika Théon na ndi n’eso ya si di, enwere ike iru site na mmepe nke ihe omuma, nke ime mmuo dika ihe omuma, ihe omuma, na ihe omuma, nke kachasi nma n’ime onodu nke uzo na nchebe nchebe, nke mmadu nwere ike ichoputa ma jikọta ya ike na mbara igwe. Ihe omuma a ka Madame Théon ruru, onye tinyere echiche ya banyere oge ochie nke mmadu n'ime ihe edere edeputara site na Bekee rue French ma biputa ya na Nnukwu Cosmic na Omenala Cosmique. Laterfọdụ ederede ederede Bekee mechara bụrụ ndị otu Argaman bipụtara.
Omume ntụgharị uche na usoro ọhụụ na-arụ ọrụ dị mkpa na Cosmic Movement na mpụga ya. Dị ka Cosmic Philosophy si kwuo, a ga-enwe ike na ikike dị elu karịa ọnọdụ zuru oke, nke a na-ezo aka zuo ike, ma ọ bụ zuo ike. Omume nke nnabata zuo ike na-eme ka nnabata na assimilation nke ike ndị dị na mbara igwe, mmepe nke ọgụgụ isi na nyocha nke mpaghara ndị dị elu site na "ndị nwere mmetụta," ndị mmadụ (ọkachasị ụmụ nwanyị) nwere ikike ọgụgụ isi pụrụ iche. The Cosmic Philosophy na-amata ọkwa dị iche iche nke passivity, site na ntụgharị uche nke onye ọ bụla na-ahapụ ọrụ uche ma ọ bụ nke anụ ahụ niile iji meghee ikike ndị dị na mbara igwe, ruo na steeti kachasị elu nke mmụọ "exteriorization" (Raziel na-abịa). Ndị otu Cosmic Movement na-eme mmemme mmeghe zuo ike ntụgharị uche, yana nyocha dị omimi nke ndị di na nwunye. N'oge nyocha dị otú ahụ, nwanyị na-eche nche na-eduzi ma chebe ya. Dị ka e kwuru n'elu, e dere ihe ndị a na-ede ede na mbara igwe nke Madame Théon n'oge mgbagha uche, nke Théon na-eduzi. A nọgidere na-eme ụdị dị iche iche nke nyocha na-aga n'ihu na mmepe na njedebe nke Cosmic Movement. Ndị otu Jerusalem Argaman sokwa na usoro mgbasa ozi ndị Juu.
Ejiri otu mmekorita nke The Cosmic Movement sitere na mmekorita n'etiti Theons na ndị esotericists French, F.-Ch. Barlet na Julien Lejay. Theons, onye biri na Tlemcen, Algeria, bụ ndị ndu mmụọ nke otu a. Ha malitere na nkuzi ha na nkuzi ha, ma ọ bụ ha dere ọtụtụ akwụkwọ nke mmegharị ahụ. Ka o sina dị, ha etinyeghị aka na nzukọ bara uru nke mmegharị ahụ. Bere a Madame Theon wui wɔ afe 1908 mu no, Max Theon sii ne bo sɛ ɔbɛbɔ ne bra ma ɛne n’apɛde ahyia. N'ime afọ ndị mbụ ya, F.-Ch na-eduzi ebe etiti ngagharị na Paris. Barlet, onye gara Theons na Tlemcen na 1900 na 1901, ma dezie mpịakọta mbụ nke Akwụkwọ Cosmique, yana Julien Lejay. Mgbe esemokwu na Théon nwere, na 1902, Barlet gbara arụkwaghịm dị ka onye ndezi nke Akwụkwọ Cosmique ma hapụ ije ahụ. N'afọ ndị sochirinụ, Théon deziri ya Akwụkwọ Cosmique n'okpuru aha Aia Aziz, site na enyemaka nke Louis Lemerle, onye jere ozi dị ka onye na-echekwa magazin ahụ. Louis Thémanlys, onye sonyeere Cosmic Movement na 1904, ji nke nta nke nta bụrụ onye ndu na njem ahụ ma hazie ọrụ ya na Paris.
Mgbe Madame Théon nwụsịrị, ndị Akwụkwọ Cosmique kwụsịrị ịpụta. Site na enyemaka nke nwunye ya, Claire Blot, Louis Thémanlys gara n'ihu na-eduga n'òtù, ndị zutere n'ụlọ di na nwunye ahụ na Paris. Thémanlys bipụtara akwụkwọ akụkọ ọhụụ, Le Mouvement Cosmique, wee gaa n'ihu na-ebipụta mpịakọta nke La Omenala Cosmique, na akwụkwọ ndị ọzọ metụtara Cosmic Philosophy. Ndị ọzọ so n’ezinụlọ Blot gbakọkwara na ndị isi nke usoro ahụ. Nwanne Claire, onye ihe osise Jacques Blot (1885-1960), jere ozi dị ka onye na-echekwa ego ngagharị na ọgọ ya nwoke, Marc Semenoff (Marc Kogan, 1884-1968) (onye edemede na onye ntụgharị okwu akwụkwọ Russia) jere ozi dị ka odeakwụkwọ ukwu ya (Chanel 1993: 504). Na 1921, Thémanlys guzobere ma guzoro n'isi nke Idéal et Réalité otu, nke nọ na-arụ ọrụ ruo 1930. Mgbe ọnwụ Louis, na mgbe Agha Warwa nke Abụọ gasịrị, ọtụtụ ndị na-eso ụzọ a nabatara Pascal Thémanlys dị ka onye nkụzi kachasị ikike nke Cosmic Philosophy. O guzobere otu Argaman ma kwado ihe omume nke igwe na Israel na France. Taa, obere ìgwè nke ụmụazụ nke nkuzi nke mbara igwe na-ezukọ iji mụọ na ikpezi oge niile na Israel, France, na Turkey (na ikekwe n'ebe ndị ọzọ). Ọ bụ ndị isi obodo na-ahazi ha, ọ nweghịkwa nzukọ etiti, ma ọ bụ onye ndu mmụọ a ma ama nke ndị otu niile nabatara.
Ihe ịma aka siri ike nke Cosmic Movement bụ ịga n'ihu nke ọrụ ya n'ụdị kwekọrọ na ọdịbendị nke oge a, ma na-ejigide isi ihe ozizi Theons. Nke a bụ ezigbo nchegbu, ebe ọ bụ na ịgbaso ọnwụ Pascal Thémanlys enweghi ikike ime mmụọ ma ọ bụ nzukọ etiti nke ndị otu niile ghọtara. Ọzọkwa, ìgwè ndị a na-adọta ụmụazụ ọhụrụ ole na ole, Cosmic Philosophy nọ n'ihe egwu ịnwụ dị ka ọdịnala dị ndụ.
Ihe ịma aka ọzọ nye Cosmic Movement bụ ichekwa ebe nchekwa ya (nke gụnyere leta nke Theon dere; ederede nke Teresa; ihe odide Bekee mbụ nke Theona's Writa; Louis, Claire na Pascal Themanlys ihe odide, na ihe ndị ọzọ). Asher Binyamin, Julie Chajes na Boaz Huss na-akwadebe ụfọdụ n'ime ihe ndị a maka mbipụta, na usoro nyocha nke Israel Science Foundation kwadoro (enyeghị 1405/14).
Image # 1: Foto nke Max Theon.
Foto # 2: Foto nke mkpuchi nke Una Universal Philosophic Society.
Foto # 3: Foto nke F. Ch Barlet.
Image # 4: Foto nke Louis na Claire Thémanlys.
Image # 5 Foto nke mkpuchi nke Chọta Cosmique.
Foto #6: Foto nke mkpuchi nke Ezigbo et Realite.
Foto # 7: Foto nke Louis na Pascal Thémanlys.
Foto # 8: Foto nke Pascal Thémanlys.
Akwụkwọ Akụkọ Achlama. 1978.
Baryosher, Jacques na Chantal. 1982. Fleurs entr'ouvertes: Propos initiatiques suivi de Enseignement de la Philosophie Cosmique Aia Aziz na-agbanwe agbanwe. Paris: Avirah.
Baryosher, Jacques na Chantal. 1995. Premiya Pas vers la Kabbale. Paris: Fernand Lanore.
Bender, Aryeh, 1982. "Achọrọ m ụlọ tii ma hụ" Argaman. " Jerusalem 5:42 [Hibru].
Benharoche-Baralia, Maurice. 1967. À l'Ombre de la Omenala Cosmique. Biarriz: l'auteur.
Apková, Helena. na-abịa. "Miloš Maixner (1873-1937) na Cosmic Movement na Ọnọdụ nke Czechoslovak Hermeticism." Na Egwuregwu Cosmic: Isi mmalite, Akwụkwọ akụkọ, Mmetụta, nke Asher Binyamin, Julie Chajes na Boaz Huss dere. Beersheba: Mahadum Ben-Gurion nke Negev Press.
Chanel, Onye Kraịst. 2006. "Théon, Max," Pp. 1112-13 n'ime Dictionary nke Gnosis na Western Esotericism, nke Wouter J. Hanegraaff dere na Antoine Faivre, Roelof van den Broek, na Jean-Pierre Brach. Leiden: Brill.
Chanel, Onye Kraịst. 1993. “De la 'Fraternité hermétique de Louxor' au 'Mouvement Cosmique'. l'oeuvre de Max Théon. ” Ogbogu Okonji Ntughari. Paris: Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Godwin, Joscelyn, Christian Chanel, na John P. Deveney. 1995. Hermụnna Hermetic nke Luxor: Akwụkwọ edemede na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke Order of Practical Occultism. York Beach, M: Samuel Weiser.
Heehs, Peter. 2011. "Kabbalah, Philosophie Cosmique, na Yoga zuru ezu: Ọmụmụ ihe na Cross-Cultural Influence." NDỤ 11: 219-47.
Huss, Boaz. 2016. "Cosmic Philosophy na Arts: The Cosmic Movement na Idéal et Réalité cirlce." Nova Religio 19: 102-18.
Huss, Boaz. 2015. "Madam Théon, Alta Una, Mama Superior: Ndụ na Personas nke Mary Ware (1839-1908)." NDỤ 15: 210-46.
Laurant, Jean-Pierre. 2006. “Barlet, François-Charles.” Pp. 162-63 na Dictionary nke Gnosis na Western Esotericism, nke Wouter J. Hanegraaff dere na Antoine Faivre, Roelof van den Broek, na Jean-Pierre Brach. Leiden: Brill.
Raziel. Ewa. Na-abịa. "Alaka nke Osimiri Cosmic: Otu dị na Paris na Jerusalem." Na Egwuregwu Cosmic: Isi mmalite, Akwụkwọ akụkọ, Mmetụta, nke Asher Binyamin, Julie Chajes na Boaz Huss dere. Mahadum Ben-Gurion nke Negev Press.
Status du Ọchịchị “Echiche." nd
Théon, Max 1992. Onye nke isii Cosmic Epoch. Jerusalem: Argaman.
Théon, Max 1991. Ọhụụ nke Oge Ebighị Ebi. Jerusalem: Argaman.
Toumrakine, Alexandre. na-abịa. "Ihe Nketa nke Cosmic Movement na Turkey." Na Egwuregwu Cosmic: Isi mmalite, Contexts, Mmetụta, nke Asher Binyamin, Julie Chajes na Boaz Huss dere. Mahadum Ben-Gurion nke Negev Press.